'बलियो र बृहत कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठन आजको आवश्यकता'
नेकपा एमाले अहिले एकता हुन्छ वा हुदैन भन्ने बहसको उत्कर्षमा छ । दुबै पक्षबाट एकताको पहल भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै निस्कर्ष निस्केको छैन । एमालेमा जुन विवाद भयो त्यो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण भएको हो । ओलीलाई प्रयोग गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्दै छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्न ओली प्रयोग भईरहेका छन् । ओलीले सबै भन्दा पहिला पुस ५ मा एकलौटी रूपमा संसद विघटन गरे । त्यो समयमा त नेकपा सिङगो थियो । तर उनले कसैसंग सरसल्लाह नै गरेनन् ।
उनको यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरायो । संसद पुनस्थापना भयो । त्यसपछि उनले त्यो नेकपाका विरुद्ध समानान्तर कमिटी गठन गरे । बुहमत पक्ष तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा थियो । तर उनले छुट्टै समानान्तर कमिटी गठन गरे । जुन नेकपाको विधान विपरित थियो ।
२३ फागुनको अदालतको फैसला पछि एमाले माओवादी केन्द्र व्युतायो । त्यो व्युतिएपछि अब कसरी जाने भनेर छलफल गर्नु पथ्र्यो तर ओली पक्षले रातारात अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्ने भन्दै देशभरी एमालेको साइनबोर्ड टाँङ्ने काम गर्न थाले । जब कि नेकपा अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउन पहल गर्नु पथ्र्यो । तर ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्न प्रयोग भइरहेका हुदा उनी नेकपा बचाउनु भन्दै विभाजन नै चाहन्थे भन्ने कुराको पुष्टि भयो ।
ओलीले एमालेलाई अहिले कुनै पनि अवस्थामा एक ठाउँमा रहन दिदैनन् । उनले जसरी पनि एमाले विभाजन गर्नु नै छ । ओलीले २३ गतेको फैसला पछि २८ फागुनमा एमालेको साधारण सदस्य पनि नभएका मानिसलाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गरे । पदाधिकारी नियुक्ति गरे । त्यसपछि एमालेका होइन आफ्नो कोटरीका मानिसहरुलाई जिम्मेवारी दिने काम गरे । तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी बिहीन बनाए । पदच्यूत गरे ।
उनले फागुनबाट एमालेको नाममा गुट संचालन गदै आएका छन् । उनले विधि विधान मिचेका छन् । जब कि २३ फागुनको अदालतको फैसला भनेको २ जेठ २०७५ सालमा फर्कन भनेको हो । तर ओली अहिलेपनि २ जेठमा जान चाहदैनन् । यदि उनी २ जेठमा जान चाहन्थे भने एमालेको २०५ जनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पथ्र्यो ।
उनी मुखले २ जेठमा जाने पनि भनिरहेका छन् ,तर उनी व्यवहारले ३ जेठ २०७५ को कमिटीलाई मान्नु पर्छ भन्छन् । यस्तो गरेर कसरी एकता हुन्छ ?
उनले अस्तिसम्म त्यहि अवैधानिक कमिटीको बैठक बोलाउदै आए । उनको भनाइ र गराइमा अन्र्तरविरोध छ । तीन गतेको कमिटी र २८ फागुनको कमिटी मान्नु पर्छ भन्ने अनि कसरी एकता हुन्छ ?
अहिलेको ओलीको व्यवहार एमालेको एकता होइन कि विघटन तर्फ लैजादै छन् । ओलीले पछिल्ला कामहरू असंवैधानिक गरेका छन् । संसद विघटन गरे तर पनि उनलाई गल्ती गरेको नै महसुस भएको छैन ।
ओलीले माफी माग्नु पर्छ
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिया छिया बनाउने काम ओलीले गरेका छन् । संविधान कुल्चेका छन् । उनले अब आम नेता कार्यकर्ताहरूलाई माफि माग्नु पर्छ । त्यो भएन भने एकताको संभावन कम हुन्छ । उनले सच्चिनु पर्छ नसच्चेर कसरी एकता हुन्छ ? पार्टी एकता हुनु भनेको पहिलाको अवस्थामा होइन । गल्ती कमि कमजोरीको समिक्षा हुनु पर्छ ।
फागुन २३ बाट ओलीले चलाएको गुटलाई सर्वोच्चले खारेज गरीसक्यो । उनको त्यो २८ फागुनको कमिटी अबैध भनिसक्यो अनि अहिले कुन तरिकाले बैठक बोलाइ रहेका छन् ? उनले मनोनित गरेका केन्द्रीय कमिटीलाई सर्वोच्चले अबैध ठहराएपछि पनि बैठक बोलाइ रहेका छन् । जुन अदालतको आदेश विरुद्ध पनि छ ।
अहिले एमालेमा दुई पक्ष छन् । यसमा दुबै पक्षबीच एकता आवश्यक हो । ओलीले आफूलाई एमाले भन्थे तर सर्वोच्चले खारेज गरी दियो । यो एकता नै हो । तर एमाले नै छैन । दुबै मिलेपछि एमाले हुने हो ।
हस्ताक्षर फिर्ता हुदैन
हामीले हस्ताक्षर गरेको ओलीको स्वच्छाचारी चरित्रका विरुद्ध हो । संविधान बचाउन हो । देश बचनाउन हो । ओलीले क्याबीनेट बैठकबाट संसद विघटन फिर्ता लिए हुन्छ । यदि ओलीले संदविघटन फिर्ता लिदैनन भने हाम्रो हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुदैन । ओलीले सिंङगो देश सक्ने बेला हाम्रो हस्ताक्षरले देश बच्च भने किन देश नबचाउने भनेर गरेका हस्ताक्षर हुन । जसको महत्व धेरै ठूलो छ । यसकारण हस्ताक्षर फिर्ता हुदैन । हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता चाहियो भन्नेले संसद विघटन फिर्ता लिए सबै कुरा सकिन्छ ।
ओलीले नेता कार्यकर्तालाई भ्रममा पारेका छन्
ओलीले हामीलाई पार्टी फुटाउन थालेको आरोप लगाउँछन् । उनी आफै संविधान मिच्ने, पार्टी विधि विधान मिच्ने तर उल्टै हामीलाई पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै आएका छन् । तर यस्तो होइन । उनले हामीलाई जति भनेपनि पार्टी फुटाउने ओली नै हुन ।
हाम्रो तर्फबाट अहिलेपनि धेरै इमान्दारी साथ दोस्रो तहका नेताहरू लागि राख्नु भएको छ । हामीहरू साच्चै एमालेको एकता चाहन्छौ । त्यसकोलागि हामी तयार छौ । तर उनीहरू पार्टीको बैठक भन्दै गुटको बैठक गदै निर्णय गरीरहेका छन् । ओलीका पछिल्ला गतिविधिले दोस्रो तहका नेताहरूपनि निराश भएका छन् । उहाँहरू पनि अब पार्टी एक हुदैन भन्नेमा पुगीसक्नु भएको छ । ओलीले भने हामीलाई आरोप लगाउदै आएका छन् । जुन भ्रामक कुरा हो । ओली पक्ष एमाले एकता चाहदैनन् । हामीले एक दुई दिन बालुवाटारको बैठक रोक्नुहोस भन्दा रोक्नु भएन ।
ओली जति प्रयास गर्दा पनि मान्नु भएन भने अगाडिको बाटो छँदै छ ।
अहिलेको एमाले यस्तो हुनमा ओलीको नियतले काम गरेको छ । उनी अदालतको फैसला, पार्टीको विधान मान्दैनन भने उनको नियत नै खराब छ । उनको दृष्टिकोण नै खराब छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नु पर्छ
यदि एमाले एकता भएन भनेपनि अरु कम्युनिस्टहरूबीच एकता हुनु पर्छ । ओली त कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्न लागेका छन् । हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ । यहाँ धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् । ती सबै एक भएर अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसकोलागि तयारी गर्नु पर्छ । ओलीले एमाले मिल्नै हुन्न भनेपछि अर्को बाटो रोज्नु नै पर्छ । हामी त्यो विषयमा पनि बहस छलफलमा छौ ।
ओली करेक्सन भएन भने उनको भन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । उनी करेक्सन भयो भने एक पटक एमाले एक हुन्छ । होइन भने शसक्त कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ ।
एमालेलाई एकता गर्नु पर्छ । तर फागुनमा सर्वोच्चको फैसलाले एमाले हुन बाध्य पारेको हो । अब भने एमाले एक हुनु पर्छ भन्दा पनि ओलीले त्यो हुन दिएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट एकताबद्ध गर्न लाग्नु पर्छ ।
सुर्य चिन्ह भनेको सिम्बोल हो
म आफै २०४७ सालदेखि एमालेमा छु । सुरु देखि अहिलेसम्म सूर्यमा भोट हालेको हो । तर कम्युनिस्टमा विचार ,सिद्धान्त र सिद्धान्तलाई कार्यन्वयन गर्ने संगठन हुनु पर्छ । दृष्टिकोण ठूलो हो । आम जतालाई प्रभाव पार्ने कार्ययोजना प्रमुख हो ।
सुर्य चिन्ह पाएपछि पनि धेरै ठाउँ चुनाव हारेका छौ । पहिलो संसदीय चुनावमा दोस्रो भयौ । ५१ सालको मध्यावधिमा ठूलो दल भयौ । ०५६ सालमा दोस्रो दल भयौ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तेस्रो भएका हौं । यो समयमा पनि सुयै चिन्ह त थियो नि । किन हारेर तेस्रो भयौ ?
यहि जेठ ६ गते बाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा रामबहादुर थापाले सुर्य चिन्ह हुदा पनि किन हारनु भयो ? कलम चिन्ह भएका खिमलाल देवकोटाले किन जित्नु भयो ? कुरा विचारको भिजनको हो । जनता प्रति कार्यकर्तप्रतिको इमानदारीता हुनु पर्छ ।
ओली आफै एमाले सक्ने अभियानमा छन्
अहिले ओलीले गरीरहेका काम कारवाहि एमाले सक्ने छन् । उनी अदालत , पार्टीको विधि ,विधान नमानेर एकलौटी रूपमा गुट चलाई रहेका छन् । एमाले त अहिले छदै छैन । हामी आफ्नो पक्ष चलाएर बसेका छौ । ओली पनि आफ्नो पक्ष चलाएर बसेका छन् । त्यसकारण ओलीले गर्नु पर्ने पहल भन्दा पनि स्वेच्छाचारी रूपमा गुट चलाई रहेका छन् । यो भनेको एमाले सक्ने अभियान हो । हामी अन्तिम समयसम्म एकताको प्रयास जारी राख्ने छौ ।
-चौधरी एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
मङ्गलबार २२, असार २०७८ ७:४१:५९ मा प्रकाशित